Norwich City 0-1 Manchester United: Rigoore uu dhaliyay Ronaldo oo Rangnick siiyay guushii labaad oo isku xigta ee horyaalka | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Norwich City 0-1 Manchester United: Rigoore uu dhaliyay Ronaldo oo Rangnick siiyay...
Norwich City 0-1 Manchester United: Rigoore uu dhaliyay Ronaldo oo Rangnick siiyay guushii labaad oo isku xigta ee horyaalka
Rigooro muran dhalisay oo uu Cristiano Ronaldo uu dhaliyay Manchester united ayaa siisay Ralf Rangnick guushii labaad ee isku xigta ee Premier League iyadoo Manchester United ay 1-0 kaga badisay Norwich City.
United ayaa wakhti dheer ku qaadatay guusha garoonka Carrow Road laakiin waxa la siiyay fursad ay ku jabiyaan ismari waa dheer oo lama filaan ah markii Max Aarons uu qalad ku galay Ronaldo taasi oo loogu dhigay Rigoore.
Weeraryahanka Portugal ayaa u soo kacay rigooradii loo dhigay ciyaarta oo ka harsan 15 Daqiiqo isagoo si xoog leh u dhameystiray Goolkaasi
United ayaa ku jirta kaalinta shanaad, iyadoo la dhibco ah kooxda kaalinta afaraad ee West Ham, laakiin farqiga goolasha ayaa kaga hooseysaa halka Norwich ay weli seddex dhibcood ka hooseyso halka lagu badbado.
United ayaa booqan doonta Brentford talaadada, halka tababaraha Norwich Dean Smith uu ku soo dhaweynayo kooxdii hore ee Aston Villa Carrow Road.
Chelsea oo go’aan soo daahay ka qaadan doonta bed qabka Mason...
Laacibka khadka dhexe ee Chelsea Mason Mount ayaa ku qasbanaan doona inuu ka gudbo imtixaan caafimaad oo soo daahay si uu u wajaho Al-Hilal semi-finalka Koobka Kooxaha...
Barcelona oo kula tartameysa Manchester United, Manchester City iyo Real Madrid...
Ciidanka Danab oo qabtay gaari siday qaraxyo culus, kadibna dilay..
Haaland oo guri ka iibsaday Dalka Spain Xili Xiiseenayaan Real Madrid...